Dood kor loogu qaadayo ganacsiga haweenka oo Muqdisho lagu qabtay | Radio Muqdisho
Dood kor loogu qaadayo ganacsiga haweenka oo Muqdisho lagu qabtay
Published on January 2, 2013 by admin · No Comments · 1,630 views
Dood kor loogu qaadayo ganacsiga haweenka ayna ka qeybgaleen mudaneyaal katirsan baarlmaanka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Doodan waxaa soo qaban qaabisay hay’adda horumarrinta adeegga Bulshada oo kaashaneysa hay’adaha ILO iyo Iida, waxaa uuna ku saabsaneydi horumarrinta Ganacsiga haweenka iyo guulaha ay iminka ka gaareen arrimahaasi, iyadoo ay ka soo qeyb galeen xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, Soomaaliya Ururro, Haweenka Ganacsatada qaarkooda, iyo Culumudiin.
Intii aan la guda galin dooda ayaa hadal uu jeediyay Sheekh Axmed Cabdullaahi “Garruun” waxa uu uga hadlay waxa ay ka qabto |Diinta Islaamka in haweenka ay ganacsadaan iyo in ay ka qeyb galaan shaqooyinka caamka ah ee Bulshada isagoona sheegay in diinta ay qabto in haweenka ay ganacsadaan.
Markii ay billaabtay dooda ayaa inteeda badan diirrada lagu saaray sida horumar loo gaarsiin karo Ganacsiga qeybta ay ku leeyihiin haweenku, waxaan dooddaasi kadib laga bixiyay madasha casharro.
Ururka Ganacsatada Haweenka Soomaaliyeed xog-hayeeda guud ayaa faah faahin ka bixisay guulaha ay Haweenka ka soo hoyeen horumarrinta Ganacsigooda muddooyinkii la soo dhaafay iyadoo sheegtay in ay gareen hormar balaaran.
Ugu dambeyntii agaasime ku xiggeen NGO-ga soo abaabulay doodda horumarrinta ganacsiga haweenka ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in u jeedada siminaarkan uu yahay sidii loo hormarin lahaa ganacsiga haweenka.